ဖား စပိုက်ဒါမန်းနှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှ သူရဲကောင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖား စပိုက်ဒါမန်းနှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှ သူရဲကောင်းများ
ဖား စပိုက်ဒါမန်းနှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှ သူရဲကောင်းများ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 3, 2012 in Copy/Paste, Photography | 15 comments
ဒါက စပိုက်ဒါမန်း ဟန်မျိုးနဲ့ တွေ့ရတဲ့ ဖားတစ်ကောင်ပါ။ အဲ့ စပိုက်ဒါ ဖား ကိုက်ရင် ဖား စပိုက်ဒါ ဖြစ်တယ် (မစ္စတာတောက်တဲ့) read more@dailymail
TV ထဲက စပိုက်ဒါမန်း read more@dailymail
ဖား စပိုက်ဒါမန်းကို ဒါ့ပုံရိုက်ယူ ရရှိခဲ့သူ read more@dailymail
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး …။
ဂနေ့ ဂျာနယ်ထဲပါလာတဲ့ ဖားစပိုက်ဒါမန်းကို ရှာရင်းနဲ့ တွေ့လာတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်တာပါ …။
ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ….
ကျုပ် သိဒယ်နော် ..
မမြင်ပါစေနဲ့သာ ဆုတောင်းပေဒေါ့ …
ကိုဂီ ……. အဆဲခံချင်လို့နဲ့တူတယ် ……. သူရိုက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး သူများဟာဒွေကို သေခါနီး လူတွေကဒီလိုပါပဲ ကယောင်ကတန်းတွေထထဖြစ်တတ်ကြတယ် ….. နားလည်ပါတယ်လေ ……မတ်စေ့ အတွက်မပူနဲ့နော် အများကြီးရှိတယ် အပေ့ါစေ့လား အလေးစေ့လား ကြိုက်တာပြော ……..
နာမည်တွေ ကို ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်း လုပ်နေကြ မှတော့ မန့် တွေသူတွေ ရော ကုန်တာ မဆန်းဘူး။
ဒါက မောင်ဂီ ဝုတ်ဝူး။
၆မျက်နှာ မောင်အံဇာ ကွဲ့။
မောင်ဂီ က မတ်စိ ထက် ကျပ်စိ ကို ပို ကြိုက်မှာ။
ဂျပန် က ဗန်းဒီး မရှီး တွေ မှာ ကျပ်စိ သုံးလို့ ရတယ် ကြားဘူးလို့။ ;-)
ပုံတွေထဲက ဒါ့သ် ဗေဒါ ကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ :-)
အော် ဟုတ်လားအရီးလတ် စိတ်ညစ်တယ် မိဂီကလည်းနံမည်တွေပြောင်း ကိုကြီးအံ (လူပျိုစစ်စစ်) ကလည်းပြောင်းဆိုတော့ လူကမျက်စေ့လည်ကုန်ပီ ……… စိတ်မမှန်တဲ့လူဒွေ စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူဒွေက နံမည်ကိုဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့ ….. စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ် ………..
…မတ်စေ့ အတွက်မပူနဲ့နော် အများကြီးရှိတယ် အပေ့ါစေ့လား အလေးစေ့လား ကြိုက်တာပြော ……..
သဘောင်္သီးတွေများ တယ်ကံကောင်းသကိုး …
ဆိုမာလီလက်ထဲရောက်တောင် စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ဂိုးလို့ရဘီ
ဒီမယ် သူများသားသမီးကိုသိပ်မကျိန်ဆဲနဲ့ တို့ချစ်ချစ်ကို ဆိုမာလီကိုဖြတ်တဲ့သင်္ဘောဘယ်တော့ မှမစီးခိုင်းဖူး မှတ်ထား သေစရာရှိမြန်မြန်ဖြောင့်ဖြောင့်သာသေတော့ ကိုပစ်စလက်ခတ်မျက်ရည် ခေါ် ကိုအင်ဇာဂီခေါ် ကိုနူးဘာကြီးရဲ့ အမလေးသေဖို့အရေးကို သူ့အမျိုးဆိုမာလီတွေကို တနေတယ် ………
နင်တို့ အမျိုး ပုတ်သင်ညိုဟဲ့
လက်နဲ့ ခြေထောက်တွေကို သေချာကြည့်အေ
ဖားသက်ပြင်းဘက်က ပါတာ မဟုတ်ပါ ဂျာနယ်မှားတာနဲ့ နင်ပါ လိုက်မှားနေလို့
တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ တောက်တဲ့တို့ အမျိုး..
အဟီ ရောင်းစားလိုက်ရလို့ တလုပ်ပြည်ရောက်တော့မယ် ဒီတောက်တဲ့ကတော့
အဲဒီ လင့်မှာ ဒီလိုရေးထားတယ်အေ့
Strikeapose: The brightly-coloured Mwanza Flat Headed Agama lizard even mimics Spidey’s famous crouch
The lizard isaMwanza Flat Headed Agama, which are native to Africa and usually live in groups with one dominant male – usually the most colourful.
မူရင်းက တောင်အာဖရိက မျိုးနွယ်အေ့
Lizard ဆိုတာက ပုတ်သင်ညိုလို့ ခေါ်ရမှာပေါ့
ပြောရင်းနဲ့ Ringo ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားလေး ပြန်ကြည့်ချင်ရဲ့